पत्याउनु हुन्छ ? बाबु–आमा मरेको चार वर्षपछि जन्मियो बच्चा ! – Aajako Khabar
काठमाडौँ, १ वैशाख, यो विश्वमा अदभूत कुराहरु हुन्छन् जो हामीलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ । कति हल्ला वा भ्रम हुन्छन् तिनीहरुको त सत्य खुलेपछि अस्थित्व सकिन्छ । तर कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन् तथ्य सार्वजनिक भएपछि नपत्याइ सुखै छैन ।
चीनमा हालै यस्तै एक घटना भएको छ । बाबु–आमा मरेको ४ वर्षपछि उनीहरुको बच्चा जन्मिएको छ । यो सुन्दा कसैलाई पनि विश्वास लाग्दैन । तर पुष्टि नै गरेपछि नपत्याइ सुखै छैन । चिनिया मिडियाका अनुसार ४ वर्षअघि एक दम्पतीको सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो । सन् २०१३ मा निधन भएका उनीहरुको बच्चा भने सन् २०१८ अर्थात् ४ वर्षपछि जन्मिएको छ । ‘द पैचिङ न्यूज’ यो समाचारलाई यसै हप्ता छापेको हो ।
सन् २०१३ मा बाबु–आमाको सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गयो जसको बच्चा अहिले जन्मियो । उनीहरुको मृत्यु हुनुभन्दा अघि नै ती दम्पत्तिले आफ्नो भ्रुणलाई सुरक्षित राखेका थिए । उनीहरुको भ्रुणलाई प्रयोग गरी एक सरोगेट (भाडाकी) आमाले उनीहरुको बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । यो अहिलेको चिकित्सा विज्ञानले सम्भव गरायो । ती दम्पतीहरुलाई आईवीएफ प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो बच्चा जन्माउने चाहना भएको सो पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
दुर्घटनापछि दम्पतीका आमा–बुबाले उनीहरुको भ्रण प्रयोगको लागि ठूलो कानुनी लडाइ लडेको बताइएको छ । सोही भ्रुणलाई प्रयोग गरी एक लाओसकी सरोगेट आमाले बच्चाको जन्म दिएकी हुन् ।
दुर्घटनाको बेला उनीहरुको भ्रुणलाई नान्जिङ अस्पतालले माइनस १९६ डिग्रीको तापक्रममा नाइट्रोजनमा सुरक्षित राखेको थियो । बच्चाको जन्मपछि उसक हजुरबुबा–हजुरआमाले ठूलो कानुनी सफलता हात पारेको बताएका छन् । यस अघि चीनमा यस्तो किसिमको घटना नभएको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०७५, शनिबार १६:१५ 2018-04-16 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged चिकित्सा चीन भाडाकी आमा विज्ञान सरोगेट
जिमेलमा हुँदैछन् ५ परिवर्तन !
तपाईंको यो वर्ष (वार्षिक राशिफल)
Tags: चिकित्सा, चीन, भाडाकी आमा, विज्ञान, सरोगेट